Fighting U Kyaw Thu! Fighting Tun Ko Ko! ဟု သူတို့ရဲ့ PPE ဝတ်စုံ တွေ ပေါ်မှာ ရေးထိုး ပြီး အား ပေး ခဲ့တဲ့ ဆရာဝန် များ – Cele Posts
ပရိတ်သတ် ကြီးရေ ဦးကျော်သူနဲ့ ထွန်းကိုကိုတို့ကတော့ ဝေဘာဂီ ဆေးရုံကြီးမှာ တက်ရောက်ကုသနေကြတာ ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ ဒီနေ့မှာတော့ ကုသပေးနေတဲ့ ဆရာဝန်ကြီးတွေ ကိုယ်တိုင်က ပရဟိတသမားကြီး တွေကို အချိန်နှင့် တပြေးညီ ပံ့ပိုးပေးနေပြီး
ဆေး၊ကုထုံး၊ကြင်နာ၊စေတနာ၊မေတ္တာ၊ကိုယ်ချင်းစာနာစိတ်တို့ပြင် သူတို့ဝ တ်ဆင်ထားတဲ့ PPE ဝတ်စုံတွေပေါ်မှာ “Fighting U Kyaw Thu” “Fighting Tun Ko Ko”ဟုသူ တို့ရဲ့ PPE ဝတ်စုံတွေပေါ်မှာ သူတို့ရဲ့ နာမည်တွေ ကိုပါ ရေးထိုးပြီး အားပေးခဲ့ကြ တာဖြစ်ပါတယ်နော်။
ဆေးဝါးကို အကောင်းဆုံး ကုသပေးနေတဲ့ အပြင် ခုလိုရေးထိုးကာ အားပေး စကားများ ပြောကြားခြင်း သည်လည်း လူနာများအတွက် အထူးခံနိုင်ရည် အင်အားများကို ဖြစ်ပေါ်စေသော ကုထုံးများ ဖြစ်ပါတော့သည်။
Fighting U Kyaw Thu! Fighting Tun Ko Ko! ဟု သူတို့ရဲ့ PPE ဝတျစုံ တှေ ပျေါမှာ ရေးထိုး ပွီး အား ပေး ခဲ့တဲ့ ဆရာဝနျ မြား
ပရိတျသတျ ကွီးရေ ဦးကြျောသူနဲ့ ထှနျးကိုကိုတို့ကတော့ ဝဘောဂီ ဆေးရုံကွီးမှာ တကျရောကျကုသနကွေတာ ပဲဖွဈပါတယျနျော။ ဒီနမှေ့ာတော့ ကုသပေးနတေဲ့ ဆရာဝနျကွီးတှေ ကိုယျတိုငျက ပရဟိတသမားကွီး တှကေို အခြိနျနှငျ့ တပွေးညီ ပံ့ပိုးပေးနပွေီး
ဆေး၊ကုထုံး၊ကွငျနာ၊စတေနာ၊မတ်ေတာ၊ကိုယျခငျြးစာနာစိတျတို့ပွငျ သူတို့ဝ တျဆငျထားတဲ့ PPE ဝတျစုံတှပေျေါမှာ “Fighting U Kyaw Thu” “Fighting Tun Ko Ko”ဟုသူ တို့ရဲ့ PPE ဝတျစုံတှပေျေါမှာ သူတို့ရဲ့ နာမညျတှေ ကိုပါ ရေးထိုးပွီး အားပေးခဲ့ကွ တာဖွဈပါတယျနျော။
ဆေးဝါးကို အကောငျးဆုံး ကုသပေးနတေဲ့ အပွငျ ခုလိုရေးထိုးကာ အားပေး စကားမြား ပွောကွားခွငျး သညျလညျး လူနာမြားအတှကျ အထူးခံနိုငျရညျ အငျအားမြားကို ဖွဈပျေါစသေော ကုထုံးမြား ဖွဈပါတော့သညျ။